Globle Media: सत्यको कसीमा, तथ्यको खोजी ! मुसलधारे वर्षासँगै चीनमा भीषण बाढी, कम्तीमा १२ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । लगानीकर्ताको आत्मविश्वास भरिएका कारण धितोपत्र बजारमा यस साता शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक र कारोबार रकमसमेत दुवैमा वृद्धि भएको छ । शेयर कारोबार हुने साताका पाँच दिनमध्ये तीन दिन नेप्सेमा वृद्धि भयो भने सोमबार र बिहीबार भने ओरालो लाग्यो ।
ग्लोबल संवाददाता शनिबार, साउन १६, २०७८, १७:३५:००
सुनको मूल्यमा ५ सय रुपैयाँले बढ्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनको भाउ तोलामा ५०० रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार अघिल्लो दिनको तुलनामा शुक्रबार केही मूल्य वृद्धि भएको हो । शुक्रबार छापावाला सुनको भाउ प्रतितोला ९२ हजार ९०० रुपैयाँ र तेजाबी सुनको लागि प्रतितोला ९२ हजार ४०० रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
ग्लोबल संवाददाता शुक्रबार, साउन १५, २०७८, १२:०३:००
सरस्वती चौधरी टोकियो ओलम्पिकमा पहिलो चरणबाटै बिदा ग्लोबल संवाददाता
टोकियो ओलम्पिक : चीन र जापानलाई उछिन्दै अमेरिका शीर्ष स्थानमा ग्लोबल संवाददाता
पहिरोपीडितलाई भेट्न संघीय सांसद, प्रदेश उपसभामुख र मन्त्री शिखरबेंसीमा
नुवाकोटको गुरुङगाउँमा पहिरो झर्दा सडक अवरुद्ध, धन्न फसेन उपसभामुख तामाङ
एक हजार नेपालीका लागि खुल्यो इजरायलमा रोजगारी, के छ आवेदनको मापदण्ड ?
कोरोनाको ग्राफ दैनिक उकालो : विज्ञ भन्छन्-'कति फैलाउने भन्‍ने नागरिककै हातमा'
१७ साउन, २०७८
मुसलधारे वर्षासँगै चीनमा भीषण बाढी, कम्तीमा १२ जनाको मृत्यु
ग्लोबल संवाददाता बुधबार, साउन ६, २०७८
तस्बिर : ग्लोबल टाइम्स
काठमाडौं । चीनका विभिन्न प्रान्तमा मुसलधारे वर्षासँगै आएको बाढीमा परी कम्तीमा १२ जनाको मृत्यु भएको छ ।
अधिकारीहरुका अनुसार हेनान प्रान्तमा १० हजारभन्दा बढी मानिसलाई उद्धार गरी सेल्टरमा राखिएको छ । बाढीका कारण दर्जनौं सहर प्रभावित भएका छन् ।
बाढीले मुख्य राजमार्गसमेत डुबानमा परेपछि सवारी साधन ठप्प छन् भने हवाई उडान पनि स्थगित गरिएको छ । झन्डै १० करोड जनसंख्या रहेको हेनान प्रान्तले वर्षा सुरु भएसँगै अस्वभाविक बाढी आउन सक्ने भन्दै चेतावनी जारी गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएका तस्बिर र भिडियोहरुमा सडकहरू डुबेको र कारहरु बाढीमा बगेको दृश्य देख्न सकिन्छ । पछिल्लो बाढीले क्षति पुऱ्याएका कारण हेनानको बाँधमा पनि क्षति पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
चिनियाँ समाचारपत्र ग्लोबल टाइम्सका अनुसार हेनान प्रान्तमा ६० वर्षयताकै ठूलो पानी परेको हो । जङ्जो सहरमा २०१.९ मिलिमिटर प्रतिघण्टासम्म पानी परेको ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ । यसअघि सन् १९७५ मा १९८.५ मिलिमिटर पानी परेको त्यहाँको राष्ट्रिय मौसम विभागले जनाएको छ । विज्ञहरुका अनुसार इन्फा आँधीका कारण वर्षा भएको हो ।
राष्ट्रपति सी चिनफिङले अधिकारीहरुलाई तत्काल उद्धारको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ६, २०७८, १०:१०:००
शनिबार, साउन १६, २०७८ कोभिड–१९ सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि जापानमा स्वास्थ्य सङ्कटकाललाई निरन्तरता
शनिबार, साउन १६, २०७८ एनआरएनए जापानको अध्यक्षमा पौडेल निर्वाचित
शुक्रबार, साउन १५, २०७८ भारतमा थप ४४ हजार नयाँ सङ्क्रमित, एक दिनमा ५५५ जनाको मृत्यु
शुक्रबार, साउन १५, २०७८ कवयित्री प्रतिमा अनेसास सुप्रमा इप्रमा पुस्कारबाट सम्मानित
बिहीबार, साउन १४, २०७८ लडाइँका कारण दशौं हजार अफगानीहरुले घर छाडे
बिहीबार, साउन १४, २०७८ एनआरएनए कोरियाको अध्यक्षमा दीपक पुनः निर्वाचित
मेलम्ची बाढी : चनौटेको रातो पुल बगायो [अपडेट]
सिन्धुपाल्चोक मेलम्चीमा फेरि बाढी, रेडियो मेलम्चीको भवन ढल्यो, सचेत रहन प्रशासनको आग्रह
ज्योति गुरूङको ‘परदेशी छोरी’ तीज गीत सार्वजनिक
दार्चुला घटनाको छानबिन गर्न वाइसिएलको माग
कोभिड–१९ सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि जापानमा स्वास्थ्य सङ्कटकाललाई निरन्तरता
गाउँमा पूजाको प्रसाद खाँदा करिब २८ बिरामी
ओलीलाई संकेत गर्दै नेपालले भने, 'फेरि प्रधानमन्त्री बन्छु कि भनेर जालझेल र षड्यन्त्र कसैले नगरोस्'
कोरोना अपडेट : थपिए ३१ सय ६ कोरोना संक्रमित, १९ सय १६ निको, २३ जनाको मृत्यु
नवराज विकको हत्याका आरोपीलाई संरक्षण गरेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्मालाई बर्खास्त गर्न माग
ग्लोबल मिडिया प्रा.लि.